ဂေါငျးကွီးတို့…အရိုးလေးကိုကျရရုံနဲ့ သာယာမနကွေနဲ့ – Shwe Thadin
အမဲလိုကျခှေးတှဟော မနကျဖနျ အမဲလိုကျဖို့အတှကျ တညကွိုပွီး သခငျက အစာမကြှေးပဲ အငတျထားတဲ့ထုံးစံရှိတယျ။ အမဲလိုကျ ခှေးဟာ တညလုံးဆာလောငျနတောပေါ့….ဒီလိုနဲ့တောထဲရောကျတော့ ဗိုကျကဆာ ဒေါသကလညျးဖွဈနတော့
သားကောငျရဲ့အနံ့ကို သာမနျခှေးတှထေကျ ပိုရတယျ။ ဘယျသူကို စိတျနာရမှနျးမသိတဲ့စိတျ ကသခငျအားကိုးနဲ့ တှသေ့မြှသားကောငျကို အစှမျးကုနျ သ တျပု တျဖမျးဆီးပေးတယျ။ သားကောငျရတော့
သူ့သခငျကသူ့ခေါငျးကိုပှတျပေးလိုကျတယျ။ အမဲလိုကျခှေးခဗြာ ကနြေပျလှနျးလို့ ဗိုကျအဆာ ပြောကျသှားတယျ။ သူ့သခငျက သူကွောငျ့ရတဲ့အမဲကို ကောငျးကောငျး ခကျြပွုတျ စီမံတယျနဖေို့ညစာ ထားတယျ။
တခြို့ကိုအခွောကျလှမျးတယျ။ အမဲလိုကျ ခှေးဟာသူ့သခငျကိုကွညျ့ပွီး ပြျောနရှောတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သခငျစားသောကျပွီးတဲ့ အခါ သူအတှကျ အရိုးတှကေို ပဈပေးလိုကျတာကိုဟနျကြ ပနျကနြဲ့အမွီးနှံ့ပွီး စားရှာတယျ။
သူဟာ ဒီအခွအေနမြေိုးကိုသိပျကနြေပျတယျ။ လောကမှာ သူ့လောကျ စိတျခမျြးသာတဲ့ ခှေးမြိးမရှိဘူးလို့ ထငျနရှောတယျ။ သူ့သခငျက သူကွောငျ့စီးပှါးတှဖွေဈလို့သူကတော့ ဒုံရငျးကဒုံရငျးပဲ…
သူလိုကျဖမျးသ တျပု တျပေးခဲ့အမဲကောငျတှေ တောကောငျတှေ ဘယျလောကျတောငျမြား လညျး လို့အမဲလိုကျခှေးခမြာ…မမှတျမိနိုငျတော့ဘူး။ အမှနျက သူအစာငတျခဲ့ရတဲ့ ရကျတှေ နဲ့ အတူတူပဲ သူမသိလို့ရယျ….ဒီလိုနဲ့ တခါမှာ သခငျကို
မကျြနှာလုပျခွငျဇောနဲ့တောဝကျကို ဝငျအလုံးမှာ အဲခှေးဟာဝကျပကျခံရပွီး တောထဲမယျကိုယျနဲ့ ခေါငျး နဲ့ တခွားစီဖွဈပွီး သှေး အလိမျး လိမျးနဲ့ အသကျထှကျသှားခဲ့တယျ။ ဒီတော့လညျး သူ့သခငျက သူ့ကိုတောထဲမှာပဲပဈစလကျခတျ ပဈထားခဲ့တယျ။
အဲဒီလို အမဲလိုကျခှေးရဲ့စှနျ့စားခွငျးတှအေတှကျ သူ့သခငျက သူ့ကို ဘာနဈနာကွေးမှမပေးတဲ့အပွငျ ဘာဂုဏျယူစှာလညျးလူကွားထဲ မပွောဘူးတဲ့….ဒီလိုနဲ့ သူ့သခငျဟာ နောကျထပျခိုငျးလို့ရမဲ့အမဲလိုကျခှေးကိုထပျမှေးပွီး…..
အရငျခှေးကို သတိတောငျရဖို့ စိတျကူးတောငျ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒီလိုပါပဲ တခြို့လူတှဟော…. ဘယျသူ့ကွောငျ့ ဆာလောငျခဲ့ ရလဲ မသိပဲ အမဲလိုကျခှေးလို သခငျကွီးပှားဖို့အတှကျ ခှေးစိတျထကျ နိမျ့တဲ့စိတျဓာတျတှနေဲ့ လုပျရပျဆိုးတှကေို လုပျနကွေတယျ။
သခငျတှကေသာ ကွီးပှားပွီးခှေးစိတျဓာတျ နဲ့လူတှကေသခငျဆိုတဲ့အာဏာရူးအတှကျ မဖွဈစလောကျ…..အရိုးလေးကိုကျရရုံနဲ့ဘဝမှာသာယာနကွေတယျ။ အမွငျမှနျတှေ အမွနျဆုံးရဖို့တော့လိုပါပွီ။
အမဲလိုက်ခွေးတွေဟာ မနက်ဖန် အမဲလိုက်ဖို့အတွက် တညကြိုပြီး သခင်က အစာမကျွေးပဲ အငတ်ထားတဲ့ထုံးစံရှိတယ်။ အမဲလိုက် ခွေးဟာ တညလုံးဆာလောင်နေတာပေါ့….ဒီလိုနဲ့တောထဲရောက်တော့ ဗိုက်ကဆာ ဒေါသကလည်းဖြစ်နေတာ့
သားကောင်ရဲ့အနံ့ကို သာမန်ခွေးတွေထက် ပိုရတယ်။ ဘယ်သူကို စိတ်နာရမှန်းမသိတဲ့စိတ် ကသခင်အားကိုးနဲ့ တွေ့သမျှသားကောင်ကို အစွမ်းကုန် သ တ်ပု တ်ဖမ်းဆီးပေးတယ်။ သားကောင်ရတော့
သူ့သခင်ကသူ့ခေါင်းကိုပွတ်ပေးလိုက်တယ်။ အမဲလိုက်ခွေးခဗျာ ကျေနပ်လွန်းလို့ ဗိုက်အဆာ ပျောက်သွားတယ်။ သူ့သခင်က သူကြောင့်ရတဲ့အမဲကို ကောင်းကောင်း ချက်ပြုတ် စီမံတယ်နေ့ဖို့ညစာ ထားတယ်။
တချို့ကိုအခြောက်လှမ်းတယ်။ အမဲလိုက် ခွေးဟာသူ့သခင်ကိုကြည့်ပြီး ပျော်နေရှာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သခင်စားသောက်ပြီးတဲ့ အခါ သူအတွက် အရိုးတွေကို ပစ်ပေးလိုက်တာကိုဟန်ကျ ပန်ကျနဲ့အမြီးနှံ့ပြီး စားရှာတယ်။
သူဟာ ဒီအခြေအနေမျိုးကိုသိပ်ကျေနပ်တယ်။ လောကမှာ သူ့လောက် စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ခွေးမျိးမရှိဘူးလို့ ထင်နေရှာတယ်။ သူ့သခင်က သူကြောင့်စီးပွါးတွေဖြစ်လို့သူကတော့ ဒုံရင်းကဒုံရင်းပဲ…
သူလိုက်ဖမ်းသ တ်ပု တ်ပေးခဲ့အမဲကောင်တွေ တောကောင်တွေ ဘယ်လောက်တောင်များ လည်း လို့အမဲလိုက်ခွေးခမျာ…မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး။ အမှန်က သူအစာငတ်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေ နဲ့ အတူတူပဲ သူမသိလို့ရယ်….ဒီလိုနဲ့ တခါမှာ သခင်ကို
မျက်နှာလုပ်ခြင်ဇောနဲ့တောဝက်ကို ဝင်အလုံးမှာ အဲခွေးဟာဝက်ပက်ခံရပြီး တောထဲမယ်ကိုယ်နဲ့ ခေါင်း နဲ့ တခြားစီဖြစ်ပြီး သွေး အလိမ်း လိမ်းနဲ့ အသက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီတော့လည်း သူ့သခင်က သူ့ကိုတောထဲမှာပဲပစ်စလက်ခတ် ပစ်ထားခဲ့တယ်။
အဲဒီလို အမဲလိုက်ခွေးရဲ့စွန့်စားခြင်းတွေအတွက် သူ့သခင်က သူ့ကို ဘာနစ်နာကြေးမှမပေးတဲ့အပြင် ဘာဂုဏ်ယူစွာလည်းလူကြားထဲ မပြောဘူးတဲ့….ဒီလိုနဲ့ သူ့သခင်ဟာ နောက်ထပ်ခိုင်းလို့ရမဲ့အမဲလိုက်ခွေးကိုထပ်မွေးပြီး…..
အရင်ခွေးကို သတိတောင်ရဖို့ စိတ်ကူးတောင် မရှိခဲ့ဘူး။ ဒီလိုပါပဲ တချို့လူတွေဟာ…. ဘယ်သူ့ကြောင့် ဆာလောင်ခဲ့ ရလဲ မသိပဲ အမဲလိုက်ခွေးလို သခင်ကြီးပွားဖို့အတွက် ခွေးစိတ်ထက် နိမ့်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုးတွေကို လုပ်နေကြတယ်။
သခင်တွေကသာ ကြီးပွားပြီးခွေးစိတ်ဓာတ် နဲ့လူတွေကသခင်ဆိုတဲ့အာဏာရူးအတွက် မဖြစ်စလောက်…..အရိုးလေးကိုက်ရရုံနဲ့ဘဝမှာသာယာနေကြတယ်။ အမြင်မှန်တွေ အမြန်ဆုံးရဖို့တော့လိုပါပြီ။